I-Ox Man Dragon Woman ixesha elide ukuhambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Ox Man Dragon Woman ixesha elide ukuhambelana
I-Ox Man Dragon Woman ixesha elide ukuhambelana
Indoda ye-Ox kunye nomfazi weDragoni baya kuhlala besilwa ukuba ngubani omele alawule kubudlelwane babo kuba bobabini bafuna ukukhokela. Ngelixa egcina indalo kwaye eyimveli, uyadlamka kwaye uyakulangazelela ukubonwa. Nangona kunjalo, ukuba banokwamkela iziphene zomnye nomnye kwaye basebenze ngengqondo yabo eqhelekileyo, banokuba sisibini esonwabileyo emva kwako konke kuba banokubanakho okuninzi kunye nenqanaba eliphezulu lokuhambelana.
Iikhrayitheriya I-Ox Indoda yeDrag Woman yokuhambelana ngesiDanga
Umfazi wegongqongqo unesibindi kwaye unesibindi kakhulu, ngelixa indoda ye-Ox inenkani kwaye igxeka. Bobabini bobabini baphupha kakhulu kwaye bahlala befaka izimvo zabo kuba bayasebenza.
Iingxaki zinokuvela kuba indoda ye-Ox kunye neDrag woman abafuni ukuba ubomi babanike izinto ezifanayo, ndingasathethi ke ukuba banobuntu neenkolelo ezahlukeneyo. Ulwalamano lwabo luya kuphila kuphela ukuba bazimisele ukwenza ulungelelwaniso kunye nokuqondana.
Indoda ye-Ox yinkqubo kwaye ihlawula ingqalelo enkulu kwiinkcukacha. Akazithandi iimbambano kwaye ukhetha ukuziphepha nokuba zithini. Xa kuziwa kukungqinelana kwakhe nenamba yomfazi, kufuneka aqonde ukuba yintoni emkhuthazayo kwaye ayiqhubayo.
Nokuba bangathandana kangakanani na aba babini, kusenokuba nzima kubo ukugcina ukupha kunye nokwenza imisebenzi elinganayo. Ngelixa besenokuqondana, bobabini baneenkani kakhulu. Umfazi wegongqongqo uya kuhlala eyithanda indlela ahlonipheke ngayo indoda yakwa-Ox.
Bangabantu abomeleleyo abangenakushukunyiswa, banothando kwaye bayanyamezelana. Nangona kunjalo, ukuba bafuna ukuhlala kunye ekuhambeni kwexesha, kufuneka benze ulungelelwaniso kwaye basebenze nzima kubudlelwane babo.
Indoda ye-Ox inesineke kakhulu, ke umfazi weDragoni unokungayiqondi kuba ingamandla eNdalo kwaye uhlala ngesantya esikhawulezayo. Akayi kuyeka engenanto xa esiya empumelelweni, nto leyo ethetha ukuba angamgweba kunye nezinto asisidenge.
Xa ujonga izinto ngolu hlobo, kunokuthiwa ezi zimbini azihambelani kakhulu kuthando. Ngaphezulu koku, indoda ye-Ox iyakuthanda ukuhlala ekhaya kwaye iyonwabele intuthuzelo, ngelixa umfazi we-Dragon kufuneka azive onwabile kwaye aphume ahambe kangangoko kunokwenzeka.
Unokumfundisa into okanye ezimbini malunga nokuba angabonwabela njani ngakumbi ubomi bakhe. Uya kuhlala emkhumbula, kodwa kufuneka alumke angashiywa nenkumbulo yomntu onomdla ebomini bakhe.
Kulula ukuqonda ukuba kutheni abantu behlala bethandana nenenekazi le Dragon, njengoko linamandla kwaye linomtsalane, lihlala liziko lokuqwalaselwa kwaye linomdla.
Uyathandwa ngabaninzi, ke indoda eyenzeka ukuba ibe naye kufuneka yamkele ukuba uyathandana ngalo lonke ixesha. Ngaphandle koko, umfazi weDragoni unamandla amaninzi kwaye ufuna ukwenza izinto ngendlela efanelekileyo.
Kudinga ulungelelwaniso oluthile
Xa kuziwa kwindlela ahlala ngayo umfazi weDragoni, oku kukuthatha imiceli mngeni ngokuzithemba okukhulu. Oku kuthetha ukuba ngamanye amaxesha uthatha ngaphezulu kunamandla okusingatha kwaye angene engxakini.
Ubuncinci ulunge kakhulu ekusombululeni iingxaki. Umahluko phakathi kwakhe nendoda ye-Ox uninzi, ke ubudlelwane babo bunokuba bunzima. Umfazi wegongqongqo uphila ngemithetho yakhe kwaye ulindele ukuba ubomi bakhe bube mnandi.
Ngelixa ayithandayo indoda yakwa-Ox, akanakugcina ingqalelo yakhe kuye ixesha elide kuba uyatsiba kakhulu. Baya kuba ngamaqabane amashishini alungileyo kuba uyazi xa kufuneka athathe umngcipheko kwaye uhlawula ingqalelo enkulu kwiinkcukacha.
Xa kuziwa kuthando, umfazi weDrag kunye nendoda ye-Ox kufuneka benze ulungelelwaniso kwaye basebenze nzima kwinto ebancedayo baphelelisane. Indoda ye-Ox inokunceda umfazi weDragoni ukuba angaphinde enze izigqibo zobudenge, ngelixa yena enokumnceda ukuba onwabe.
Nangona kunjalo, konke oku kuya kufuna bobabini ukuba babeke kwimizamo ethile. Ukuba banokufumana into abanokulwa ngayo kunye, banokugqibela ngokuba sisibini esiphumelele kakhulu. Indoda ye-Ox yindabuko kwaye ayinamdla kwaphela.
Kwelinye icala, umfazi we-Dragon uyathandana kwaye ufuna ukunconywa ngabantu abaninzi. Xa bekunye, aba babini kufuneka bafunde ukunika kunye nokuthatha ngaphezulu. Ukuba abenzi njalo, banokugqibela ngokulula ukwahlukana. Umtshato wabo usebenza ngcono ukuba baneenjongo ezifanayo kwaye basebenza nzima kakhulu ngenxa yabo.
Iminyaka yamaTshayina ye-Ox: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 no-2009
Iminyaka yamaTshayina yeNamba: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 no-2012
I-ox Chinese Zodiac: Iimpawu eziPhambili zoBuntu, uthando kunye nethemba lomsebenzi
I-Dragon Chinese Zodiac: Iimpawu eziphambili, uthando kunye nethemba lomsebenzi
Nge-22 kaNovemba i-Zodiac yiSagittarius-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
NgoFebruwari 14 Imihla yokuzalwa
leo umfazi uthandana nendoda yescorpio
Epreli 18 ukuhambelana kweempawu zodiac
Umhlaza uthanda i-horoscope ngoDisemba ka-2014
2/27 uphawu lweenkwenkwezi
iimars kwindlu yokuqala yokubonakala
I-taurus horoscope ngo-Disemba ka-2015